मन्त्रि लालबाबुले गर्दैछन कर्मचारीलाई कारवाही , कोको परे त कारवाहीमा ? हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > मन्त्रि लालबाबुले गर्दैछन कर्मचारीलाई कारवाही , कोको परे त कारवाहीमा ? हेर्नुहोस
admin April 10, 2018 समाचार 0
काठमाडौं । कर्मचारीहरुकै कारण संघीयता धरापमा पर्छ भनेर केही टिप्पणी पहिले देखि नै सुनिएको हो । स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीले अटेरी गरिरहँदा कर्मचारीमाथिको आशंका थप जायज ठहर हुन थालेको छ । लालबाबु पण्डित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेपछि नै कर्मचारीहरुबीच खैलाबैला सुरु भयो । यतिसम्म कि, उनीहरु आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । यता मन्त्री लालबाबु भने कर्मचारीले कुनै पनि शर्तमा खटाइएको कामबाट भाग्न नपाउने भन्दैआएका छन् ।
मन्त्री–कर्मचारीबीच यस्तो खिचातानीकै बेला नेपालआजले मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग विशेष अन्तरवार्ता लिएको छ । सिंहदरबारस्थित उनकै कार्यालयमा पुगेर गरिएको अन्तरवार्तामा उनले खटाएको काम नगरे तत्कालै कारवाही प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘आफूले रोजेको ठाउँ पाए जाने नत्र नजाने यदी कसैले गर्छ भने, उहाँलाई सरासर घर पठाइन्छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि उहाँहरुलाई पिँजडाभित्र राख्न चाहँदैनौँ । बिदा नै दिन्छौँ तर सेवा सुविधा बाहेक ।’
‘प्रधानमन्त्रीले तपाईँसँग मात्रै सल्लाह लिएर ३० जना सचिवको सरुवा गर्नुभयो । कसरी भयो यस्तो ?’ भनेर पण्डितलाई सोधिएको थियो । जवाफमा उनले ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भुमिका र जिम्मेवारीभित्रै रहेर निर्णय गर्नुभएको’भन्दै सरकारको निर्णयको बचाउ गरे । तर त्यस्तो निर्णयअघि सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रसँग सल्लाह नगरेको कुरा भने उनले अस्वीकार गरे । प्रधानमन्त्रीले आवस्यक ठाउँसँग सल्लाह गरेरै उक्त निर्णय गरेको भन्दै बचाउ गरे ।
कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकास दिने भन्दै अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उल्ट्यायो । अर्थात्, अहिलेका लागि कर्मचारीहरु स्वेच्छिक अवकास लिन नपाउने भएका छन् । मन्त्री पण्डितले कडा रुपमा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास अधिकार नभएर सुविधा भएको भन्दै सरकारको निर्णय मान्नैपर्ने बताए । साथै यदी कुनै कर्मचारी अवकास लिन तयार रहेको अवस्थामा सेवा सुविधा बिना नै जानुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
बुढानीलकन्ठमा घुस लिदा लिदै अधिकृत परे यसरि पक्राउ
सिन्डिकेटलाई जराबाटै उखेल्ने तयारी , यातायात समितिले यस्तो गर्दै !!
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा वेपत्ता हुनेको संख्या ७ पुग्यो, १ जनाको श व फेला
जागिर पाएको खुसीमा नियुक्ती बुझ्न हिँडेका शाही पेट दुखेपछि यसरी मोटरसाइकल रोकेर ढलेका थिए, कहिल्यै नउठ्नेगरी अस्ताए
विप्लबलाई आफ्नै सालीले यस्तो गम्भीर पत्र पठाएपछी, पत्र बन्यो सामाजिक संजालमा भाईरल – पुरा हेर्नुहोस